Doonii dhaabanii baduun sadarkaa yaadeessaa jira
Doonii dhaabanii baduun sadarkaa yaadeessaa jira Featured
Sababa baduu ogeeyyota galaanaatiin Itoophiyaan doolaara 450 dhabde
Ogeeyyotni galaanaa Itoophiyaa doonii dhaabanii waan badaniif biyyattiin sharafa alaa doolaara 450 dhabuushii Abbaan Taayitaa Dhimma Maritaayimii Itoophiyaa ibse.
Sadarkaa biyyooleessaatti haala leenjitootni biyyattii carraa hojii argachuu danda'anirratti kaleessa qaamota dhimmi ilaalu waliin kan mari'ate abbaan taayitichaa, barana beekamtii ogeeyyotni biyyattii sadarkaa addunyaatti ittiin hojjachuu danda'an Gamtaa Awurooppaa irraa argamus baduun ogeeyyotaa yaaddessaa ta'uu ibseera.
Baduun ogeeyyotaa kun sharafa alaa biyyattiin argachuun maltu dhabamsiisuun alatti sababa namni tokko badeef carraa hojii lammiilee biroos cufaa jiraachuu kan himan daarikerri abbaa taayitichaa Obbo Mokonnon Abarraa, barana ogeeyyotni dhaabbilee doonii lama keessaa hojjatan 10 doonii dhaabanii waan badaniif hojjettootni 111 hojii irraa ari'amuusaanii dubbataniiru.
Hojii galii olaanaa argamsiisu osoo hojjatanuu doonii dhaabanii baduun biyya jibbuu ta'uufi kanarraa ka'uu Inistitiyuutiin Maritaayimiis leenjiisaa walakkaan addaan kutuuf dirqamuusaa ibsaniiru.
Ogeeyyotni 340 bara darbe eebbifamanis sababa maqaan ogeeyyota biyyattii badeef hanga ammaatti carraa hojii kan hin arganne ta'uu kan himan immoo barsiisaa Inistitiyuutii Maaritaayimii Injinar Admaasuu Yittaagasuu, itti fufiinsa leenjiirratti gaaffiin akka uumamu taasisaa jiraachuu dubbataniiru.
Yeroo ammaa inistitiyuutichi dhaabbata Ameerikaa 'YCF Group' jedhamuufi dooniiwwan kuma afur qabu waliin hojjachaa jiraachuusaa beekameera. Kanaanis carraan hojii uumamu bal'aa ta'uyyuu hojirraa baduun ogeeyyota biyyattii amantaa isaan dhabsiisaa kan jiru ta'uu ibsaniiru.
Sababuma kanaanis yeroo ammaa dhaabbileen doonii hedduu ogeeyyota Itoophiyaa mindeessuu addaan kutaa jiraachuu himaniiru.
Baay'ina ogeeyyota galaanaatiin sadarkaa duraarratti kan argamtu Filiippiinsi, waggaatti sharafa doolaara biliyoona 5.4 ta'u damicharraa kan argattu ta'uu ragaaleen ni mul'isu.
Torban kana/This_Week 4813
Guyyaa mara/All_Days 1642408